အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ကိုယ်စီပိုင်ဆိုင် ထားကြတဲ့ အိချောပိုတို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ချစ်စရာညီမလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိချောပိုဟာ သူမရဲ့ ညီမချောလေးကို မကြာခဏ ဆိုသလို ပွဲထုတ်တတ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာ လည်း ညီမလေးနဲ့အတူဓာတ်ဖမ်းခဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ ချပြလိုက်ပြန်ပါပြီ ပရိသတ်ကြီးရေ။ စူစူ့ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ နောက်ကွယ်က ဖန်တီးမှုတွေဟာ စူစူ့ညီမလေးရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေ ဖြစ်ပြီး အမဖြစ်သူပုံကောင်လေးရဖို့ အများကြီးကြိုးစားပေးခဲ့ သူပါ။
ညီမနှစ်ယောက်လုံးက လှလွန်းတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး စူစူဟာလည်း မိသားစုကို သိပ်ချစ်တဲ့ အမကြီးအမိရာ ပီသသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ညီမလေး ကိုလည်း အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အတူတူ လျှောက်လှမ်းဖို့ လက်တွဲခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို ” အကြီးမလေးလား ? အငယ်မလေးလား ? ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်ကာ တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ စူစူတို့ညီမနှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျလေးကို ကိုယျစီပိုငျဆိုငျ ထားကွတဲ့ အိခြောပိုတို့ ညီအဈမနှဈယောကျ
ပရိသတျကွီးရေ ခဈြစရာညီမလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ အိခြောပိုဟာ သူမရဲ့ ညီမခြောလေးကို မကွာခဏ ဆိုသလို ပှဲထုတျတတျပွီး ဒီတဈခေါကျမှာ လညျး ညီမလေးနဲ့အတူဓာတျဖမျးခဲ့ ပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ ခပြွလိုကျပွနျပါပွီ ပရိသတျကွီးရေ။ စူစူ့ရဲ့အမိုကျစားပုံရိပျတှေ နောကျကှယျက ဖနျတီးမှုတှဟော စူစူ့ညီမလေးရဲ့ လကျရာကောငျးတှေ ဖွဈပွီး အမဖွဈသူပုံကောငျလေးရဖို့ အမြားကွီးကွိုးစားပေးခဲ့ သူပါ။
ညီမနှဈယောကျလုံးက လှလှနျးတဲ့ ကောကျကွောငျးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး စူစူဟာလညျး မိသားစုကို သိပျခဈြတဲ့ အမကွီးအမိရာ ပီသသူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ခဈြရတဲ့ညီမလေး ကိုလညျး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ အတူတူ လြှောကျလှမျးဖို့ လကျတှဲချေါခဲ့ပါသေးတယျ။
သူမတို့နှဈယောကျရဲ့ အမိုကျစားပုံရိပျတှကေို ” အကွီးမလေးလား ? အငယျမလေးလား ? ” ဆိုပွီး ပရိသတျတှကေို မေးခှနျးထုတျကာ တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။တဈယောကျတဈမြိုးစီ လှသှေးကွှယျနတေဲ့ စူစူတို့ညီမနှဈယောကျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျတငျဆကျပေး လိုကျပါတယျ။
ချစ်တူလေးရဲ့ ချစ်စဖွယ် အမူအယာလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းယားနေတဲ့ ၀တ်မှုံရွှေရည်